ခုခံအားက သခြောပေါကျ အရေးကွီးပါတယျ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကိုယျ့ဘေးပတျဝနျးကငျြကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ တခြို့တှကေ သူမြားထကျကို ထူးထူးခွားခွား ပိုဖြားနာတတျကွတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့မြားလဲ တှေးမိကွပါသလား။ ခုခံအားစနဈကွောငျ့ပေါ့။ လူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ခုခံအားမတူညီကွပါဘူး။ သကျကွီးရှယျအိုတှနေဲ့ ကလေးလေးတှမှောဆိုရငျ ခုခံအားစနဈက ပိုအားနညျးတာမို့ မကွာမကွာ ဖြားနာတတျကွပါတယျ။
ခုခံအားဆိုတာ ရောဂါပိုးမှားတှကေို တားဆီးပေးပွီး ရောဂါဘယတှမေဖွဈအောငျ ကာကှယျပေးထားတဲ့ ခံတပျကွီးပေါ့။
ရုတျတရကျ ရာသီဥတုပွောငျးလဲတာ၊ အပူလှိုငျးအအေးလှိုငျးတှကေ ခုခံအားစနဈကို လြော့နညျးစနေိုငျပါတယျ။ အအေးလေးဝငျလာပွီဆိုတာနဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျး ရောဂါတှဖွေဈတဲ့ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ခြောငျးဆိုးလေးက စလာပါပွီ။
>> ခုခံအားစနဈက ဗိုငျးရပျဈပိုးတှကေို ဘယျလိုတိုကျခိုကျကွသလဲ?
အရပွေားနဲ့ တံတှေးဟာ ခန်ဓာကိုယျက တခွားတဈသြှူးတှလေိုပဲ ရောဂါပိုးမှားတှေ မဝငျရောကျလာနိုငျအောငျ အဓိကတားဆီးပေးတဲ့ ခုခံအားစနဈတဈခုပါ။ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ဆဲလျတခြို့ဟာ ရောဂါဝငျနိုငျတဲ့နရော ဥပမာ - အနာဖွဈတဲ့နရောတှကေိုသှားပွီး ပိုးတှကေို တိုကျခိုကျနိုငျသလို တခြို့ဆဲလျတှကေ တဈသြှူးတဈမြိုးမြိုးထဲမှာနနေပွေီး ခုခံအားစနဈကို စောငျ့ကွညျ့ပွုပွငျပေး၊ အနာကကျြအောငျ ကူညီပေးကွပါတယျ။
ဒီလို ခုခံအားစနဈက ခန်ဓာကိုယျကို ကာကှယျဖို့အတှကျ စှမျးအငျတှေ အမြားကွီးလိုအပျပါတယျ။ တဈကိုယျလုံး ပငျပနျးနုံးခြိနတော၊ ညောငျးကိုကျနတော၊ အပူတှမြေားနတော၊ ဂလငျးကြိတျတှေ ရောငျနတောတှဟော ခုခံအားစနဈက တဈခုခုကို တိုကျခိုကျနတေဲ့လက်ခဏာရပျတှပေါပဲ။
>> ခုခံအားစနဈကို တိုးမွှငျ့ပါ။
ခုခံအားစနဈကောငျးလာစဖေို့ လူနမှေုပုံစံတှေ၊ စားသောကျပုံတှေ ပွောငျးလဲပေးနိုငျပါတယျ။
၁။ မနကျစာ စားပါ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ မနကျစာမစားခွငျးဟာ သှေးတှငျးအခြိုဓာတျကိုကစြပွေီး စိတျဖိစီးမှုကို မြားစနေိုငျပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျကို ဖိစီးမှုအနအေထားမှာ အဆငျသငျ့ရှိစတောကွောငျ့ ခုခံအားစနဈကို ကဆြငျးစနေိုငျပါတယျ။
၂။ ဗီတာမငျ C ကွှယျဝသော အစားအစာမြားကို စားပေးပါ။
ဗီတာမငျ C က ကိုယျခံစှမျးအားစနဈကို မြားစှာအထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဗီတာမငျ C ပါဝငျတဲ့ အစားအသောကျတှဖွေဈတဲ့ ပနျးဂျေါဖီစိမျးနှငျ့ အစိမျးရောငျရှိတဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား၊ ငရုပျပှအနီ/ အစိမျး၊ ခရမျးခဉျြသီး၊ နာနတျသီး၊ ကီဝီသီး၊ လိမ်မျောသီးတို့ကို နစေ့ဉျစားသောကျတဲ့ အစားအသောကျထဲမှာ တဈမြိုးမဟုတျ တဈမြိုးပါဝငျအောငျ စားပေးပါ။ တကယျလို့ ပုံမှနျမစားဖွဈရငျလညျး Enervon-C လိုမြိုး ဗီတာမငျ C ပါဝငျတဲ့ အားဆေးတဈမြိုးမြိုးကို သောကျသုံးပေးလို့ရပါတယျ။
၃။ ဇငျ့ပါဝငျသော အစားအစာမြား စားပေးပါ။
ဇငျ့ကို ခန်ဓာကိုယျရဲ့ဆဲလျတိုငျးမှာ တှနေို့ငျပွီး ဆဲလျတှေ ကနျြးကနျြးမာမာနဲ့ ကွီးထှားအလုပျလုပျနိူငျဖို့ အရေးပါပါတယျ။ ဇငျ့ဟာ ခန်ဓာကိုယျထဲက ထောငျနဲ့ခြီတဲ့ ပရိုတငျးဓာတျတှနေဲ့ ခြိတျဆကျပွီး အငျဇိုငျးအလုပျပေါငျး ၃ဝဝ လောကျမှာ ပါဝငျပတျသကျနပေါတယျ။ အနာကကျြနှုနျးကိုမွနျစပွေီး သိုငျးရှိုကျလုပျငနျးဆောငျတာ၊ အူလမျးကွောငျးကနျြးမာရေး၊ သှေးခဲမှု၊ အမွငျအာရုံနဲ့ အနံ့အာရုံတှအေတှကျ အရေးပါပါတယျ။
၄။ အူလမျးကွောငျးကို ကနျြးမာအောငျထားပါ။
လလေ့ာမှုတှအေရ ကောငျးတဲ့ဘကျတီးရီးယားထကျ မကောငျးတဲ့ဘကျတီးရီးယားတှေ ပိုမြားနပွေီဆိုရငျ ခုခံအားစနဈတှေ အားနညျးလာနိုငျပါတယျ။ အစာခစြေနဈလက်ခဏာတှဖွေဈတဲ့ အစာမကွေ၊ အကျဆဈပွနျဆနျတကျတဲ့ရောဂါတှနေဲ့ အူလမျးကွောငျးနံရံတှေ မလုံတဲ့ပွဿနာတှကေလညျး ခုခံအားစနဈကို ထိခိုကျလာနိုငျတာပေါ့။
၅။ လကျဖကျရညျကွမျးလေး သောကျပေးပါ။
လကျဖကျရညျစိမျးတို့၊ အိုလောငျးတီးတို့မှာ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတဈမြိုးဖွဈတဲ့ flavonoids တှကေို တိုးစနေိုငျပါတယျ။ လကျဖကျရညျကွမျးထဲပါတဲ့ polyphenol ဟာ ခန်ဓာကိုယျကို ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးတှရေနျကနေ ကာကှယျပေးနိုငျလာပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျဟာ အိပျနစေဉျမှာ ဆဲလျတှကေို ပွနျလညျပွုပွငျပါတယျ။ အိပျရေးကောငျးကောငျးမဝတဲ့အခါ ဒီဖွဈစဉျကို ထိခိုကျလာနိုငျပွီး ခုခံအားစနဈကို လြော့နညျးလာစနေိုငျပါတယျ။
နရေောငျနဲ့ အရပွေားနဲ့ ထိတှတေဲ့အခါ အရပွေားက ဗီတာမငျဒီကို ထုတျလုပျပါတယျ။ ဗီတာမငျဒီဟာ ကိုယျခံအားကောငျးစပွေီး ကငျဆာဆဲလျတှဖွေဈပျေါမှုကို တားဆီးတဲ့အပွငျ နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျလညျး အရေးပါပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခါ ဓာတျတိုးဆနျ့ကငျြပစ်စညျးနဲ့ သှေးဖွူဥတှမှော ပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈပျေါလာတတျပါတယျ။ ဒီပဋိပစ်စညျးတှနေဲ့ သှေးဖွူဥတှဟော လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခါ ပိုပွီးလညျပတျမှု ကောငျးလာပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရောဂါဘယတှကေို စောစောစီးစီးရှာတှနေို့ငျပါတယျ။
ဆေးလိပျဖွတျခွငျးကွောငျ့ သှေးလညျပတျမှုကို ကောငျးစနေိုငျခွငျး၊ သှေးတှငျးအောကျစီဂငျြပမာဏကို ကောငျးစခွေငျး၊ အရောငျကစြခွေငျး စတဲ့ ကောငျးကြိုးတှကေို ရရှိစနေိုငျပါတယျ။
ကိုယ့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တချို့တွေက သူများထက်ကို ထူးထူးခြားခြား ပိုဖျားနာတတ်ကြတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်များလဲ တွေးမိကြပါသလား။ ခုခံအားစနစ်ကြောင့်ပေါ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ခုခံအားမတူညီကြပါဘူး။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ ကလေးလေးတွေမှာဆိုရင် ခုခံအားစနစ်က ပိုအားနည်းတာမို့ မကြာမကြာ ဖျားနာတတ်ကြပါတယ်။
ခုခံအားဆိုတာ ရောဂါပိုးမွှားတွေကို တားဆီးပေးပြီး ရောဂါဘယတွေမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ခံတပ်ကြီးပေါ့။
ရုတ်တရက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲတာ၊ အပူလှိုင်းအအေးလှိုင်းတွေက ခုခံအားစနစ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။ အအေးလေးဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ အအေးမိ၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးလေးက စလာပါပြီ။
>> ခုခံအားစနစ်က ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကို ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ကြသလဲ?
အရေပြားနဲ့ တံတွေးဟာ ခန္ဓာကိုယ်က တခြားတစ်သျှူးတွေလိုပဲ ရောဂါပိုးမွှားတွေ မဝင်ရောက်လာနိုင်အောင် အဓိကတားဆီးပေးတဲ့ ခုခံအားစနစ်တစ်ခုပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တချို့ဟာ ရောဂါဝင်နိုင်တဲ့နေရာ ဥပမာ - အနာဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီး ပိုးတွေကို တိုက်ခိုက်နိုင်သလို တချို့ဆဲလ်တွေက တစ်သျှူးတစ်မျိုးမျိုးထဲမှာနေနေပြီး ခုခံအားစနစ်ကို စောင့်ကြည့်ပြုပြင်ပေး၊ အနာကျက်အောင် ကူညီပေးကြပါတယ်။
ဒီလို ခုခံအားစနစ်က ခန္ဓာကိုယ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် စွမ်းအင်တွေ အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံး ပင်ပန်းနုံးချိနေတာ၊ ညောင်းကိုက်နေတာ၊ အပူတွေများနေတာ၊ ဂလင်းကျိတ်တွေ ရောင်နေတာတွေဟာ ခုခံအားစနစ်က တစ်ခုခုကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေပါပဲ။
>> ခုခံအားစနစ်ကို တိုးမြှင့်ပါ။
ခုခံအားစနစ်ကောင်းလာစေဖို့ လူနေမှုပုံစံတွေ၊ စားသောက်ပုံတွေ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ မနက်စာ စားပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ မနက်စာမစားခြင်းဟာ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်ကိုကျစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို များစေနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖိစီးမှုအနေအထားမှာ အဆင်သင့်ရှိစေတာကြောင့် ခုခံအားစနစ်ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။
၂။ ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို စားပေးပါ။
ဗီတာမင် C က ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ အစားအသောက်တွေဖြစ်တဲ့ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့် အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ငရုပ်ပွအနီ/ အစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ နာနတ်သီး၊ ကီဝီသီး၊ လိမ္မော်သီးတို့ကို နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်ထဲမှာ တစ်မျိုးမဟုတ် တစ်မျိုးပါဝင်အောင် စားပေးပါ။ တကယ်လို့ ပုံမှန်မစားဖြစ်ရင်လည်း Enervon-C လိုမျိုး ဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ အားဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို သောက်သုံးပေးလို့ရပါတယ်။
၃။ ဇင့်ပါဝင်သော အစားအစာများ စားပေးပါ။
ဇင့်ကို ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲလ်တိုင်းမှာ တွေ့နိုင်ပြီး ဆဲလ်တွေ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ကြီးထွားအလုပ်လုပ်နိူင်ဖို့ အရေးပါပါတယ်။ ဇင့်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အင်ဇိုင်းအလုပ်ပေါင်း ၃ဝဝ လောက်မှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေပါတယ်။ အနာကျက်နှုန်းကိုမြန်စေပြီး သိုင်းရွိုက်လုပ်ငန်းဆောင်တာ၊ အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး၊ သွေးခဲမှု၊ အမြင်အာရုံနဲ့ အနံ့အာရုံတွေအတွက် အရေးပါပါတယ်။
၄။ အူလမ်းကြောင်းကို ကျန်းမာအောင်ထားပါ။
လေ့လာမှုတွေအရ ကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားထက် မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေ ပိုများနေပြီဆိုရင် ခုခံအားစနစ်တွေ အားနည်းလာနိုင်ပါတယ်။ အစာချေစနစ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ အစာမကြေ၊ အက်ဆစ်ပြန်ဆန်တက်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့ အူလမ်းကြောင်းနံရံတွေ မလုံတဲ့ပြဿနာတွေကလည်း ခုခံအားစနစ်ကို ထိခိုက်လာနိုင်တာပေါ့။
၅။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းလေး သောက်ပေးပါ။
လက်ဖက်ရည်စိမ်းတို့၊ အိုလောင်းတီးတို့မှာ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ flavonoids တွေကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းထဲပါတဲ့ polyphenol ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေရန်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်လာပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အိပ်နေစဉ်မှာ ဆဲလ်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးကောင်းကောင်းမဝတဲ့အခါ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ထိခိုက်လာနိုင်ပြီး ခုခံအားစနစ်ကို လျော့နည်းလာစေနိုင်ပါတယ်။
နေရောင်နဲ့ အရေပြားနဲ့ ထိတွေ့တဲ့အခါ အရေပြားက ဗီတာမင်ဒီကို ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီဟာ ကိုယ်ခံအားကောင်းစေပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးတဲ့အပြင် နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အရေးပါပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနဲ့ သွေးဖြူဥတွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီပဋိပစ္စည်းတွေနဲ့ သွေးဖြူဥတွေဟာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီးလည်ပတ်မှု ကောင်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောဂါဘယတွေကို စောစောစီးစီးရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို ကောင်းစေနိုင်ခြင်း၊ သွေးတွင်းအောက်စီဂျင်ပမာဏကို ကောင်းစေခြင်း၊ အရောင်ကျစေခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။